fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့
1 fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 24th August 2009, 12:30 pm
ကဲ့အောက်က link လေးကိုသွားပြီး
2 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 24th August 2009, 12:34 pm
3 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 24th August 2009, 5:42 pm
ဟဲဟဲ....ကျွန်တော်ပို့မယ်လေ ကိုမင်းဆီကို... ဟဲဟဲ...
4 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 4th January 2010, 2:14 pm
ပို့ ခံထား ရတဲ့လူက သူဆီပို့ထားတဲ့ လူ တကယ် ပို တာ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြည့်လို့တယ်နော်
mail ကို ဖွင့် ပြီ detail မှာ ကြည့် လိုက်ရင် ကွိခနဲ ကို သိမှာပဲ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 25th March 2010, 1:24 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-25
မသိလို့မေးပါရစေ..fake mail ဘာအတွက်အသုံးဝင်တာလဲ..ဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲ
6 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 25th March 2010, 1:37 pm
ကျနော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ အပြောင်အပျက်သဘောမျိုးနဲ့ပို့တဲ့ဟာမျိုးပါ... ရပ်ကွက်တွအခေါ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပစ်စာ ပေ့ါဗျာ... ဘယ်ကမှန်းမသိပဲ အခြေအမြစ်မရှိပို့လိုက်တဲ့စာမျိုးတွေပေ့ါ... တစ်ခါတစ်လေ မှန်တာပါချင်ပါမယ်... မဟုတ်တာတွေကိုလည်း အဟုတ်လုပ်ပြီးပို့လို့ရတယ်လေ... အဲ.. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူပို့တယ်ဆိုတာကိုတော့ စာလက်ခံရရှိသူက သိရမှာမဟုတ်ဘူးလေ... ကိုယ့်မေးလိပ်စာမလိုပဲ ပို့လို့ရတဲ့ service တစ်ခုပါ... ဒီထက်ပိုရှင်းအောင်သိချင်တယ်ဆိုရင် တခြားနားလည်သူများဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ပြောကြားပေးပါလိမ့်မယ်...
7 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 25th March 2010, 2:02 pm
tin wrote: dear အကိုတို့ခင်ဗျား
Fake Mail ဆိုတဲ့သဘောက ဘယ်လိပ်စာကမဆို ပို့လို့ရပါတယ်။ အဲဒီ မေးလ် တစ်ခုတကယ်ရှိနေဖို့လဲမလိုပါဘူး။
ဆိုကြပါစို့။ အစ်ကို့ရဲ့ G-Mail က [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုပါစို့။ ကျွန်တော်ကအစ်ကို့ဆီကို Fake Mail တစ်စောင်ပို့မယ်။
To - [You must be registered and logged in to see this link.]
Subject - Account Activation
Dear Tin Tin
မိတ်ဆွေရဲ့ အကောင့်နာမည်နဲ့ဆင်တူတဲ့ Account ကို နောက်တစ်ယောက်သုံးစွဲနေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိတ်ဆွေ Privacy ရှိစေဖို့အတွက် မိတ်ဆွေရဲ့အကောင့်ကို Reactivate ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိတ်ဆွေရဲ့ Account Name နဲ့ Account Password ကိုဖြည့်စွက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
စသဖြင့်ပေါ့။ Fake Mail ဆိုတာနဲ့ To မှာ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့လိပ်စာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ From မှာလဲ ဘယ်ကပို့ချင်လဲဆိုတာရပါတယ်။
[You must be registered and logged in to see this link.] ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ကနေပြန်ပို့လို့လဲရပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်အခု နမူနာပြတာက လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သာ တကယ် Fake Mail နဲ့ယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့
အပေါ်မှာပြထားသလိုပဲ Gmail Team ကအနေနဲ့အစ်ကို့ဆီကိုစာပို့မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီမှာအခုလိုမျိုးတော့ Form ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူး။
Form အတွက် Link တစ်ခုပဲပေးထားမယ်။ အဲဒီမှာ Reactivate ပြန်လုပ်ဖို့ပြောမယ်။ အဲဒီ Link ကတော့ Google နဲ့တူအောင်လုပ်ထားတဲ့ Phishing Page တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Username & Password မှာ Script လေးနည်းနည်းထည့်ရေးပြီး အစ်ကို့ Username& Password ကိုယူလိုက်မယ်။
Fake Mail ကိုအဲလိုနေရာတွေမှာသုံးပါတယ်။
8 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 25th March 2010, 6:16 pm
ဥာဏ်ရှိသလိုအသုံးချနိုင်ပါတယ် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းကွဲအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဟီး
9 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့ on 4th July 2010, 1:31 pm
တော်တော်မိုက်တယ်နော် .. ဟဲ
ကျတော့ ကိုယ်ပို့တဲ့စာ အောက်က
No this email's not real , it's [You must be registered and logged in to see this link.]
ဒီ စာကြောင်းလေးပါ ပါ နေတယ်ဗျ..
10 Re: fake mail ပို့ကြမယ်ဟေ့